KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ - 9+ Myanmar Login Registro မူလနေရာ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ အဆန်းများ မော်လ်ဒယ်များ အားလုံးကြည့်ရန် သုတအထွေအထွေ Vídeos Photos KTV မှာလုပ်တဲ့ မမတစ်ယောက်ရဲ့ မရှက်တမ်းပြောထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စကားများ 9mpro
353 Vistas00 Gusta Add to
Cuota Enlace Corto Incrustar 550x350
ပုခုံးတွေခါးတွေ ဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့ ခုကျွေးမလိုတော်ကြာကျွေးမလို မာယာများရတာပေါ့နော်….။ သစ္စာမေတ္တာဆိုတာ ကေတီဗီလောကမှာမရှိဘူး ကေတီဗီ နွား
ဝိတ်တာလေးလာအော်တော့မှ ဘောင်းဘီတိုကောက်လဲ နူတ်ခမ်းလေး သပ်ရပ်အောင်ဆိုး ဆံပင်ကို sexy ဖြစ်အောင်ဖွပြီး Room A7 ကိုသွားပြီ။
ဒီနေ့တော့ ဘိုးတော်တစ်ပွေတည်း ဂေါက်မရိုက်ဖြစ်လို့ စောလာတာတဲ့လေ…
ဘိုးတော်က ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ ထိုင်နေပြီ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကာစတမ်မာကို အပြုံးမပျက်ရဘူးလေ…
သူ့အတွက် သောက်စရာ စားစရာမှာ… ကိုယ့်အတွက်ကျွဲရိုင်းနဲ့သီးစုံတစ်ပွဲပေါ့။
ထုံးစံအတိုင်း ဘိုးတော်ကရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ လေတွေစွတ်တိုက်နေပြန်တာ
အခုပဲ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးတော့မှာလို နိူင်ငံခြားအလည်ခေါ်တော့မှာလို
ကိုယ်တွေကလည်း ဒါမျိုးတွေရိုးလို့ရှင် ယုံချင်ယောင်တော့ ဆောင်ပြရတာပေါ့ရှင်
စီးပွားရေးအောင်မြင်ကြောင်း ပင့်ပေးရတာပေါ့ရှင် ဘောလုံးပွဲလောင်းတာတော်ကြောင်း ဘုံမြှောက်ရတာပေါ့ရှင်
လူတိုင်းက ဒီနေရာရောက်လာရင် ဘောစိလို့ အထင်ခံရတာကို ဂုဏ်ယူကြတယ်လေ
ကိုယ်တွေကတော့ သနားအောင်ဇာတ်ကွက်ဆင်ရတာပေါ့ ပထွေးနဲ့နေရတာတို့ မောင်နှမများတာတို့
အမေနေမကောင်းတာတို့ အကြွေးတင်နေတယ်တို့ဘာတို့ ညာတို့
ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင် ပိုပိုသာသာအိုက်တင် လုပ်ပြရသေးတယ်ရှင်
ဒါမှ အပိုဆာဒါးတွေကို သူတို့ကသနားအောင်ဝါဒဖြန့်ပေးမှာ။
ဒီလိုပါပဲ အများသူငါ ကေတီဗီထုံးစံအတိုင်းပေါ့
ငွေကလည်း ရှာမှဖြစ်မယ် ယောက်ျားက အလုပ်မရှိဘူး
အမေလည်းရှိသေးတယ် အိမ်လခရှိသေးတယ်။ ဒီဘိုးတော်နဲ့ဆုံတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းမေးရင် ကေတီဗီထုံးစံအတိုင်းပါပဲ ချူဆီထည့်တဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ
အိမ်လခမရှိဘူး မောင်လေးကျောင်းစရိတ်လိုတယ်ဘာညာပေါ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါပေါ့။
သူစားချင်တာကိုတော့ ခုကျွေးမလိုတော်ကြာကျွေးမလို မာယာများရတာပေါ့နော်…
ပုခုံးတွေခါးတွေ ဟိုပွတ်ဒီပွတ်တွေတော့ ရူပဒါနပြုရတာပေါ့
သစ္စာမေတ္တာဆိုတာ ကေတီဗီလောကမှာမရှိဘူး တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းဆီမှာပဲရှိလိမ့်မယ်။
ဒီဘိုးတော်လည်းကြွားသာကြွားနေတာ အရင်လို ရေမလျှံတော့ဘူးရှင်
အလုပ်ထဲ ငွေကွာလို့ပြဿနာတက်တယ်ကြားတယ်။ ဘောလုံးပွဲတွေရှုံးတယ်ကြားတယ်။
ဘိုးတော်သားနဲ့ ကိုယ်တွေသားက ကျောင်းမှာအတန်းတူတယ်။
ဘိုးတော်သားက တစ်နေ့မုန့်ဖိုးငါးရာရတယ်။ ကိုယ်တွေသားကိုအောက်ကျမှာစိုးလို့မုန့်ဖိုးတစ်နေ့ထောင့်ငါးရာပေးတယ်။
နောက်လဆို အခုကေတီဗီပိုင်ရှင်က နောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်တော့မှာ
ကိုယ်တွေ ဆိုင်သစ်ကိုပြောင်းမှာ… ဘိုးတော်ကိုတော့ အကွက်ရွှေ့ရမှာပေါ့ရှင်
အကွက်ရွှေ့တာလွယ်ပါတယ်… သူ့မိန်းမနဲ့အတူရှိချိန်မှန်းပြီး လေးငါးခါ ကြူလိုက်ရုံပဲ…
ကိုယ်လည်း ထိုက်သလောက်ရပြီးပြီဆိုတော့ သူတို့လင်မယား သတ်ကြပါလေ့စေလေ…
ကိုယ်တွေက လန်ခရူဆာနဲ့အမှန်အကန်စပွန်ဆာတစ်ယောက် ကြိုချဉ်းထားပြီးပြီ။ ခုဘိုးတော်က ချီးထုပ်ဖြစ်နေပြီလေ…
အဲလိုဘိုးတော်မျိုးကို ကိုယ်တွေက ကွယ်ရာမှာ နွားလို့ခေါ်တယ်။
ကေတီဗီက ဆော်ဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစုမျက်နှာကလွဲရင် ဘာမှစောက်ဂရုမစိုက်တာ ဒီလောကရဲ့စည်းမျဉ်းပါရှင်။
ဖုန်းထဲကနေ update အမြဲကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ Apk ဒေါင်းပြီး install လုပ်ထားလိုက်ပါ။ Publicado6months ago Categoría Imagen / သုတအထွေအထွေ
Ver más Comentarios0Comentarios Next Media လမ်းဘေး ချုံထဲကအတွဲ ခ်ခ် မပြောတော့ဘူး နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ .
လမ်းဘေး ချုံထဲကအတွဲ ခ်ခ် မပြောတော့ဘူး နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ .
0 0	435 Vistas Medios Relacionados ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
0 0	539 Vistas သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
0 0	202 Vistas ယခုအပါတ်အတွင်း ဖြစ်မယ်တဲ့နော်..။
0 0	612 Vistas အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်)6months ago6months ago အ၀ှါပြုနေတဲ့အချိန် ဒါတွေ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်)00	412 Vistas ချိန်းတွေ့ကြတဲ့ စုံတွဲတွေ အချိန်နဲ့ နေရာတွေကို သတိထားကြပါ။
0 0	491 Vistas ဘယ်လိုပုံက ဘယ်လိုရှိတယ် အပြည့်အစုံသိရအောင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..။
0 0	361 Vistas မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ခန့်မှန်းကြည့်တတ်ချင်ပါသလား..? (နှိပ်ကြည့်လိုက်..)
0 0	348 Vistas ယောက်ျားပီသကြစမ်းပါ.. ကိုကိုတို့ရယ်..။ (နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..)
0 0	319 Vistas သိပ်ချော သိပ်လှတဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူ အကြောင်း။6months ago6months ago သိပ်ချော သိပ်လှတဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူ အကြောင်း။00	361 Vistas ဖူးစငုံစ ပန်းလေးများ အခူးခံရလျှင် ( ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်)
0 0	264 Vistas Más de este usuario အပေးကောင်းလွန်းတဲ့ဆော်လေးနဲ့ အယူကြမ်းလွန်းတဲ့ ကိုကိုတို့တွေ့ကြသောအခါ
892 Vistas သင်ယူမယ့်မိန်းကလေးက ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်နော်
202 Vistas ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်..
539 Vistas ကလေးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ် ဖောက်ပြန်နေကြပြီ
877 Vistas နှစ်သစ်ကူးညနဲ့ တည်းခိုခန်းပေါ်ကမမချော
726 Vistas Please contact us at info@chatwing.com if you cant embed the chatbox